Igumbi lokulala eli-2 elinomgangatho ophantsi w / indawo yokungena yabucala
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMaria C
Ifulethi elihle elinendawo yokungena yokuphuma ebekwe kwisitrato esizolileyo esinendawo eninzi kunye nentuthuzelo yeendwendwe. Indawo entle-ibekwe embindini-umgama wokuhamba ukuya kwiMyuziyam yaseVirginia yeMbali yeNdalo, uBugcisa basePiedmont, iYMCA kunye neendawo zokutyela ezininzi. Kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi losapho elikhulu apho unokolula kwaye uphumle. Ukuya kuthi ga kwi-2 izinja ezincinci ezivunyelweyo kwi-25 yeedola / isilwanyana esongezelelweyo.
Le yindlu yangaphantsi ehlaziyiweyo enomnyango wabucala. Kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi losapho elikhulu. Kukho ibhafu egcweleyo enebhafu / ishawari combo. Kukho ikhitshi elincinci elinefriji encinci, umenzi wekofu, i-microwave, isinki kunye ne-hotplate oyisebenzisayo. Kukwakho nepatio yabucala apho unokonwaba khona ixesha ngaphandle kokuphumla. Kukho itv enentambo esisiseko kunye ne-wifi.
UKhenketho lweNdlu- https://youtu.be/PjrKhHJRRUM
Indawo esembindini kufutshane ne-Uptown Martinsville. Kumgama wokuhamba ukuya kwiMyuziyam yaseVirginia yeMbali yeNdalo, iYMCA, iZiko lobuGcisa lasePiedmont, iDick & Willie Trail, nokunye okuninzi. Imizuzu eli-10 ukuya eMartinsville Speedway. Siyi-1/2 iyure ukusuka eBlue Ridge Parkway kunye nezinye iipaki ezininzi kunye namachibi. Siyiyure enye ukusuka kwindawo enomtsalane ebukekayo yaseMabry Mill. Simi kufutshane neNdlela eCrooked eneendawo ezininzi zomculo kunye neendawo zokuqhuba ezibukekayo unyaka wonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria C
Ndiza kukuvumela ukuba wonwabele ubumfihlo bakho kodwa unokufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
UMaria C yi-Superhost